“Ronaldo lama mid ahan Beckham, sababtoo ah maalintii oo dhan wuxuu ku qaadan jiray…” – Gool FM
(Yurub) 19 Agoosto 2019. Mid ka mid ah weeraryahanadii ugu caansanaa ee soo martay kooxda Manchester United ayaa si maldahan u sheegay in Ronaldo uu ahaa wiil kibir badan muddadii uu joogay Old Trafford.
Weeraryahanka reer Uruguay ee Diego Forlan ayaa shaaca ka qaaday in weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo uu aad u jecel yahay naftiisa.
Dhinaca kale Diego Forlan ayaa xusay in Cristiano Ronaldo uusan la mid aheyn halyeeyga kooxda Manchester United ee David Beckham.
Diego Forlan ayaa si maldahan u sheegay in Ronaldo uu ahaa wiil kibir badan muddadii uu joogay Old Trafford, sababa la xiriira inuu si joogta ah ugu mashquulsanaa muraayadda si uu isku daawado xiliga uu ku sugan yahay qolka labiska.
Diego Forlan ayaa kaga garab ciyaaray Cristiano Ronaldo garoonka Old Trafford xilli ciyaareedkii 2003-2004, wuxuuna wali u muuqdaa inuu yahay mid ka careysan, maxaa yeelay wuxuu kala wareegay lambarkii maaliyadeed uu xirnaa xiligaas.
Wargeyska “Mirror” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay weeraryahankii hore ee kooxda Atletico Madrid waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Cristiano Ronaldo wuxuu ahaa shaqsi naftiisa jecel marka uu joogo qolka labiska, ma ahan sida David Beckham”.
“Wuxuu had iyo jeer doonayay inuu u dhawaado muraayadda. Maalin dhan ayuu daawanayay”.
Diego Forlan ayaa seddex xilli ciyaareed ku qaatay kooxda Manchester United laakiin wuxuu inta badan kulamada ku soo gali jiray qaab bedel ah, 98 kulan uu ciyaaray, mana uusan u dhalinin Red Devils in ka badan 17 oo kaliya.
Laakiin Diego Forlan ayaa wixii xiligaas ka dambeeyay ku muujiiyay awoodiisa ciyaareed ee dhabta ah, kaddib markii uu u dhaqaaqay horyaalka La Liga, wuxuuna u ciyaaray kooxaha Villarreal iyo Atletico Madrid.